Home Wararka Maxaa ka soo Baxay Baajinta Muxaadaradii Sheekh Umal ee Xamar?
Maxaa ka soo Baxay Baajinta Muxaadaradii Sheekh Umal ee Xamar?
Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa safar ku tagay dalka Somaliya isagoo wada mucaawino uu ka soo ururiyey dadka Somaliyeed ee Kenya deggan. Mucaawinadaas waxaa uu u soo qaaday dadkii fatahaadaha ku waxyeelloobay ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. Arrintaas waxay ahayd arrin aad u wanaagsan oo baahi weyn ka furatay dadkii dhibaatada soo gaartay.
Markii uu ku soo noqday magaalada Muqdisho ayaa Dowladda Somaliya iyo culimada Ictizam oo gacansaar la leh dowladda waxay wadaadka u qaban qaabiyey muxaadaro weyn oo lagu qaban lahaa garoonka kubadda Cagta ee Eng. Yariisow.
Hasa yeeshee Culimada suufiyada iyo Dadweyne badan oo Somaliyeed ayaa diiday muxaadaradaas in lagu qabto Xamar , waxayna dowladda iyo sheekhaba ku khasbeen in laga noqdo. Runtii dowladda hadda jirtaa kama noqoto go’aan walba oo khaldan oo ay qaadato, hasa yeeshee arrintaan waxay muujisay inay culimada Suufiyada ay leeyihiin awood xoog leh oo ay shacbiga ku kicin karaan iyo dowladda NN inay ka cabsato waxa kicin kara shacbiga.
Wadaaddadda Suufiyada waxay Sheekh Umal ku eedeeyeen inuu:
Nabiga u gafay CSW oo ku sheegay inuu Injir lahaan jiray iyo inuu meelo qashinka ah ku kaadshi jiray.
Iyo inuu horay u fadwooday fadwooyin dad badan oo culimo suufiyo, iyo kuwa aan ahaynba lagu dilay iyadoo dad shacab ahna fadwooyinkaas ay salfadeen.
Sheekh Umal waxaa uu ka tirsan yahay wadaadada horseedka ka ah fekerkaan Wahaabiyada oo si xoog leh ugu fiday 40 sano ee u dambeysay Somaliya iyo meelo badan oo caalamka ah kadib markii dalka Sacuudiga ay si xoog leh u maalgeliyeen.
Sheekha markii uu Nayroobi ku soo noqday waxaa uu sheegay inay muxaadarada baajinteeda ka shaqeeyeen dad badan oo Dacwadaan sunnada ah ee dhexdhexaadka ah ee diinteeda umadda u hagaajisay ka soo horjeeda, taas oo uu ula jeeday fekerkan wahaabiga ah. Waxaanu taxay kooxo badan sida “dhammaan dariiqooyinka xadgudubayaasha ah (guluwi); Sanaadaqo diinlaawayaal ah sida Maandoon, Somali shiico ah, kuwa siyaasiyiin ah oo mawjaddii kacdaba kursi ka raadinaya, iyo shabaab iyo Suufiyo oo iskaashaday ayaa ka shaqeeyey in muxaarada la baajiyo”.
Marka aan dib u eegnay xaaladda ku xeeran muxaadarada joojinteeda iyo baraha bulshada waxaa inoo soo baxday in dadka badankood ay ka soo horjeesteen muxaadaro ay Sheekh Umal iyo wahaabiyo ku qabanayaan Xamar oo ay joogaan dadkii lagu dhibaateeyey fekerka uu sheekh Umal Xambaarsan yahay kaas oo dhibkii wali lagu wado. Madaxweynaha ayaan toos usoo farageliyey oo Suufiya u sheegay in la baajiyey gebi ahaanba muxaadarada.
Haddaba su’aasho waxay tahay?
Ma la soo gaaray xelligii ay dadka iska qaban lahaayeen fekerkan wahaabiga ah oo dad badan lagu laayey?
Ma la soo gaaray xelligii u midodbi lahaayeen in la iska qabto oo la isu kaashado waxkasta oo dadka iyo diinta dhibaato ku ah, iyadoo hal meel looga soo wada jeesanayo?
Ma loo soo garay xelligii wadaada noockasta oo ay yihiin aan laga yeeleyn feker xag jir ah oo diinta dadka looga fidneynayo, islamarkaana dad aan waxba galabsanna lagu dilayo.
Ugu dambeynsa ma la soo gaaray xelligii wadaadada wahaabiyada iyaga laftigooda ay garowsan lahaayeen dhibtii uu geystay fekerkan wahaabiga ah ee ay dad badani ku dhinteen, shabaabna ay ku hawlgasho wali?
Masa la yaabaa si shabaab logo adkaado loo baahan yahay in marka hore laga hortago fekerka wahaabiga ah ee gadka gaaleysiiyaan, kadibna ku dilaan?
Jawaabaha su’aalahan waxaan u deyneynaa shacbiga iyo akhristayaasha.